Y2 DZAKATEVEDZANA MOTORI - anoderedza, honye anodzora, honye gearboxes, mapuraneti magiya mabhokisi, anomhanyisa anoderedza, akasiyana, helical giya, sprial bevel magiya, ezvekurima magiya, matarakita magiya, marori magiya, honye gearbox
Y2 DZAKATEVEDZANA MOTORI
musha / motokari / Y2 DZAKATEVEDZANA MOTORI
Y2 KUSANGANA KWAZVO
Y2 yakateedzana matatu-chikamu asynchronous mota, dzakagadzirwa nehunyanzvi nyowani, dzinovandudzwa uye nekuvandudza zvigadzirwa zvinoenderana neY akateedzana mota.
Y2 akateedzana mamota ari mune yakazara-yakasimbiswa dhizaini uye fan yakatonhorera mhando, squirrel keji mhando uye inoverengeka mukugadzira uye yakanaka chitarisiko, compact dhizaini, yakaderera ruzha, kukwirira kushanda, hombe torque, yakanakisa kutanga kuita, nyore kugadzirisa, nezvimwe. kutora F kirasi kuputira uye yakagadzirirwa senzira yekudzivirira inoongorora nzira zvinoenderana neyekunze maitiro.
Y2 akateedzana mota anokwanisa kushandiswa kwakawanda kune akasiyana ekutyaira michina senge zvishandiso zvemuchina, vafuridzi, mapombi, magiya, magineti, vatakuri, michina yekurima zvichingodaro.
Ambient tembiricha: 15 ℃ -40 ℃ .Altitude: hapana yakakwirira kupfuura 1000 metres kubva chisimbiso pamwero.
F kirasi kuputira, iyo tembiricha inomuka yeiyo stator ichitenderera yakaongororwa pa80K (nenzira yekudzivirira)
Dziviriro giredhi: pane chikuru muviri iri IP54, pane terminal bhokisi inogona kusvika IP55. Kutonhora nzira: IC411.
Kurongeka kwekumhanyisa kwemota kunoenderana neIEC34-7 Kurudziro. Pane mana akarongeka akaratidzwa seanotevera matafura uye manhamba.